WordPress: Maitiro Ekuvaka iyo Tag Cloud Peji | Martech Zone
Chimwe chezvinhu zvitsva zvemusoro wangu tag yegore peji. ndinofarira tag makore, asi kwete kwechinangwa chavo. Iro teki gore randinoratidza inzira chaiyo yekuti ndione kana ndiri kugara pamusoro wenyaya kana meseji yangu yeblog iri kuchinja nekufamba kwenguva.
Mutsva blogger mubatanidzwa Al Pasternak, akabvunza maitiro ekuvaka peji reTag uchishandisa iyo Yekupedzisira Tag Warrior Plugin.
Heano maitiro: Mushure mekuisa iyo plugin uye kugadzirisa zvaunogona kuita, iwe unongoisa ino inotevera kodhi mune yako Peji template iyo yako zvemukati inoratidzwa. Haudi kuisa panzvimbo yezvako zvemukati… Pedyo nayo.
Wedzera peji rakanzi "Matagi" uye siya izvo zvirimo zvisina chinhu. Voila! Iye zvino iro peji rinoratidza rako reti tag!
Kukadzi 22, 2007 na4: 53 PM
Yako tag gore iri rinotaridzika rakanakisa Doug! Yakakura nzira yekuti vaverengi vatsva vazive nekukasira rudzii rwezvinhu zvaunobloga nezvazvo.
Kukadzi 22, 2007 na4: 56 PM
Sekurudziro ine hushamwari, ini ndinokurudzira kuita default iyo "Nyorera kune makomendi kuburikidza neemail" bhokisi kusasarudzwa.
Vanhu vazhinji vanotaura nekukurumidza uye havatombo cherekedza iyo diki sarudzo. Kana vatanga kuwana 'spamm' nemaemail uye vasinganzwisise kuti nei, zvinogona kunetsa.
Chete masenti angu maviri! 🙂
Kukadzi 22, 2007 na8: 14 PM
Ndiri kuwana masanganiswa akasanganiswa pane yekunyorera cheki yekutarisa… vanhu vaviri vakatumira tsamba kwandiri uye vakandiudza kuti vaishuvira kuti dai yasarudzwa kuitira kuti vasazokanganwa kunyorera. Ini ndoda kutadza padivi rekufanosarudza. Kana mumwe munhu akapindura kumashoko ako, hongu iwe ungade kuwana ziviso. Uye zviri nyore chaizvo kusarudza kubuda.
Kukadzi 23, 2007 na12: 18 PM
Gotcha, zvakanaka zvinhu.
Feb 24, 2007 at 11:14 PM
Ini ndinofanira kune wechipiri kufunga kwaDoug pano.
Pakunyora komendi, mumwe anopinda / anotanga hurukuro. Nekudaro ini ndinofunga zvakasikwa, kuti munhu angade kuziviswa.
Kukadzi 27, 2007 na1: 16 PM
"Kutaridzika zvakanaka" gore!
Iwe unogona kushandisa anopfuura rimwe chete ruvara nehungwaru.
Imwe nzira yekushandisa mavara mune yako gore tag:
- sarudza rakakura ruvara, riise kune iro rakakura font;
- "sanganisa" uyu ruvara rwefonti diki.
Muenzaniso we "kuchena" pa
Ndiri kuyedza kumisikidza blog uko kwandinogona kuratidza akawanda emamwe marudzi mablog mune tag gore. Izvi zvichashanda here?
Zvinonakidza, Tom. Ini handifunge kuti mhinduro iyi ingashande sezvo iri kungodhonza kubva kumataki akawedzerwa mune ino blog chete. Nekudaro, zvinogona kuitika kudhonza uye kuunganidza ma tag uchishandisa Technorati's API kana rimwe remablog riri paTechnorati.
Zvinonzwika kunge chinonakidza chidiki chirongwa chirongwa!
Mhoro Mr. Doug
Ndiri kushandisa Jerome Keywords Plugin kugadzira tag-gore. Ini ndakakurudzira kushandisa Jerome Keywords Plugin panzvimbo Yekupedzisira Tag Warrior.
Ini ndinofunga Ultimate Tag Warrior yakanyanya kuomarara kushandisa. ndatenda zvakadaro.
Ndatenda, Dendi! Ini ndakawedzera zvakafanana kune plugin mune ako makomendi. Ini ndinotenda Ultimate Tag Warrior inogona kutyisa.
Akanaka tsvarakadenga tip. Kutenda nekugovana.